ကျောက်တော် ကန်ဇောက် စစ်ရှောင်စခန်းကို WFP ဆန်ဖြတ်မယ်
ကျောက်တော် ကန်ဇောက် စစ်ရှောင်စခန်းကို WFP ဆန်ဖြတ်မ...
11 ก.ย. 2562 - 18:55 น.
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်က ကန်ဇောက် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကို ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် WFP က ဆန်ထောက်ပံ့ပေးနေတာကို အခု စက်တင်ဘာလက စပြီးတော့ ဖြတ်တောက်တော့မယ်လို့ စခန်း တာဝန်ခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
အဲဒီလို ဆန်ထောက်ပံ့တာ ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် WFP ရုံးတွေကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာမှာ ဆန်ထောက်ပံ့တာရပ်မယ့် အကြောင်းကို အတည်ပြုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြတ်တောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မဖြေကြားသေးပါဘူး။
ပုဏ္ဏားကျွန်း စစ်ဘေးရှောင် စခန်းမှာ ရိက္ခာပြတ်
စခန်းတာဝန်ခံ ဆရာတော်ကတော့ WFP က အစိုးရက ဖြတ်ခိုင်းလို့ ဖြတ်တာလို့ ပြောသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ ပြောခွင့်ရ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးက အစိုးရက ဖြတ်ခိုင်းတာ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာ အိမ်ထောင်စု ၁၁၈ စု၊ လူ ၅၀၀ နီးပါး နေထိုင်နေပါတယ်။
ဒီစခန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ လေးလလောက်ကတည်းက ဆန်အပြင် စားသုံးကုန် ရိက္ခာတွေ WFPက ထောက်ပံ့ပေး နေခဲ့တယ်လို့ စခန်း တာဝန်ခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုလိုမျိုး ဆန်ထောက်ပံ့တာကို ရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံရလာနိုင်တယ်လို့ စခန်းတာဝန်ခံ ကန်ဇောက်ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
"ပထမကတော့ သူတို့ပေးနေတာ။ ဆန်ရယ်၊ ပဲရယ်၊ အာဟာရမှုန့်တွေပါတယ်။ အခုလကနေ စပြီးတော့ အစိုးရက ဖြတ်ခိုင်းတာကြောင့် ဆန်ကို ဖြတ်တော့မယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ ဦးဇင်းဆီကို WFP က ရောက်လာပြီးတော့ ပြောသွားတာပါ"လို့ ကန်ဇောက်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က မိန့်ကြားပါတယ်။
အဲ့ဒီစခန်းမှာ နေထိုင်သူတွေဟာ ကျောက်တော်နဲ့ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေတို့ တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက ယိုးချောင်းအထက်ပိုင်းဒေသက ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာခဲ့ကြတဲ့ ရွာသား တွေဖြစ်ပါတယ်။
WFPက အဲဒီ စစ်ဘေးရှောင် စခန်းကို အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းအတိုင်း လူတစ်ဦးကို တစ်ရက် ကျပ် ၃၀၀ နှုန်းနဲ့ တွက်ပြီးတော့ ဆန်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ ကန်ဇောက် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်က ပြောပါတယ်။
ဒီစခန်းကို အစိုးရက WFP နဲ့ ICRC နှစ်ဖွဲ့ကိုပဲ ထောက်ပံ့ပေးခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီး ICRC ကလည်း လာမထောက်ပံ့တာ ကြာနေပြီလို့ ဆရာတော်က ပြောပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်ကတော့ ဒီစခန်းကို အစိုးရကလည်း ဆန်ထောက်ပံ့နေလို့ တခြားရိက္ခာတွေ ပိုပေးလို့ရအောင်၊ ထောက်ပံ့မှု နှစ်ထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက အလှူငွေကောက်ခံခွင့်၊ ထောက်ပံ့ကူညီပေးခွင့်စတာတွေကို ကန့်သတ်တားဆီးထားပြီး တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင် တရားစွဲဆိုခံထားရတာတွေ ရှိတဲ့အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှုတွေနည်းနေလို့ စခန်းတာဝန်ခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှုတွေကိုလည်း ရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပိုခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ ကန်ဇောက်ဆရာတော် မိန့်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးရှောင် စခန်း စုစုပေါင်း ၁၁၄ ခုကို အစိုးရက ဆန်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ ရခိုင် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဆီက သိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကျောက်တော် ကန်ဇောက် စစ်ရှောင်စခန်းကို WFP ဆန်ဖြတ်မယ်